Kardinaly Tsarahazana Désiré : Nisaotra ny Filoha Rajaonarimampianina Hery mivady -
AccueilRaharaham-pirenenaKardinaly Tsarahazana Désiré : Nisaotra ny Filoha Rajaonarimampianina Hery mivady
16/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Notanterahina omaly tao amin’ny Stella Maris, tany Toamasina ny lamesa lehibe fametrahana ny Kardinaly Tsarahazana Désiré. Hetsika goavana sy manetriketrika no nentina nanatanterahana izany sorona masina lehibe izany. Haravoana sy endrika mirana no hita tamin’ireo mpino Katolika namonjy izany fotoam-pivavahana izany, satria fahasoavana ho an’ny Malagasy. Maro be rahateo ny olona manantena fa hitondra zava-baovao ho an’ny firenena malagasy izao fahazoana Kardinaly vaovao izao, satria ho pejy vaovao eto amin’ny firenena ny fahazoana azy. Ho fanomezam-boninahitra ny lanonana, dia tonga niara-niombom-bavaka tamin’ireo mpino Katolika manerana ny Nosy tany an-toerana ny Filohan’ny repoblika Rajaonarimampianina Hery sy ny ankohonany, ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, sy ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta.
Nandritra ny toriteny nataon’ny Kardinaly Tsarahazana Désiré dia nambarany fa mila manova toe-tsaina ny Malagasy, mila manao ihany koa ny asa tahaka ny apostoly ahafahana mampandroso lavitra ny lafin’ny finoana sy ny firenena. “Jesoa Kristy nanova endrika izao tontolo izao tamin’ny alalan’ireo mahantra sy madinika. Noho izay, isika rehetra no voaantso hitory ny evanjely, araka ny fanomezam-pahasoavana nomena antsika. Atao amin’ny alalan’ny fitenenana, tsy mijanona amin’izay ihany fa fitoriana amin’ny alalan’ny oha-piainana. Raha tsy mifanaraka amin’ny zavatra tenenina ny zavatra atao dia lasa mpandainga. Miaina ao anaty fihatsaram-belatsihy ny maro, noho izany ilaintsika mianakavy ny mibebaka. Raha tsy mibebaka isika, dia tsy hatanty ny marina ary tsy afaka hiatrika ny marina”, hoy i Kardinaly Tsarahazana Désiré. Saika maneran-tany ny ratsy noho ny afitsoky ny fitiavan-tena, ny harena, ny voninahitra ka mahatonga ny olona hampiasa hafetsen-dratsy hahazoana tombontsoa manokana. Noho izany, “mila manova toe-tsaina isika. Mila miova isika Malagasy sao dia ho lasa fomba amam-panao ny risoriso, ary hita izany amin’ny fikarakarana zavatra eny anivon’ny birao. Marihina anefa fa tsy azo ampandeferina na hiadiana varotra ny tenin’Andriamanitra, ary fahavononana hanompo ny marina no tadiavin’i Jesoa Kristy. Araka izany manaova ny marina ary matahora an’Andriamanitra”, hoy hatrany ny Kardinaly Tsarahazana Désiré.
Ankoatra izay dia nisaotra manokana ny Filoha Rajaonarimampianina Hery mivady sy Mbola Rajaonah tamin’ny fanohanan’izy ireo azy ny Kardinaly Tsarahazana Désiré. Indrindra fa ny Filoha mivady izay nanome voninahitra teo foana nanomboka tamin’ny fotoana nanendrena azy ho Kardinaly ny 20 ny volana mey teo, izay nitohy tany Roma tamin’ny fanotronana azy tamin’ny fametrahana ny barety sy satroka manamarika ny maha Kardinaly azy sy tamin’ny fitsenana azy teny Ivato tamin’ny fiverenany avy any Roma, ary mbola nanampy ihany koa teo amin’ny fanamorana ny diany nihazo an’i Toamasina. Aorian’ity sorona masina lehibe notanterahina omaly ity, dia fantatra fa horaisin’ny Diosezin’ny Fénérive Atsinanana, ao Namahoka misy ny fiangonana naoriny tamin’ny naha-Eveka azy tany an-toerana ny Kardinaly amin’ny 28 jolay ho avy izao.